Maitiro ekuchinjisa ma ringtone ku iPhone kubva iTunes 12.7 | IPhone nhau
Imwe yezvinhu zvitsva padanho re software mumavhiki apfuura kuApple iri chaizvo iTunes, uye ndizvo iyo Cupertino kambani yanga ichida kuvandudza zvishoma mashandiro ayo maneja maneja wemimhanzi uye nharembozha, ichiita kuti ireruke uye ibudirire panguva imwe chete. Nekudaro, shanduko hadzigare zvakanaka nemunhu wese.
Nechikonzero ichocho isu tichazopa wongororo yekuti mamhanzi anopfuudzwa sei akananga kune iyo iPhone kubva iTunes 12.7, saka unogona kunakidzwa nenziyo yako yaunofarira senge ringtone pasina dambudziko. Semazuva ese, dzidziso nekukurumidza uye nyore paActualidad iPhone.
Chinhu chekutanga kukuyeuchidza kuti iwe uchazoda iyo odhiyo faira mune fomati .m4r, nekuda kweizvi ndinokurudzira kuti uende kune webhusaiti ye ZEDGE uko iwe kwaunowana yakakosha nhamba yenziyo dzese masitayera, kunyangwe inonyanya kufarirwa, mune chaiyo fomati ye iPhone yako
Chinjana ringtone kubva iTunes 12.7 kuenda ku iPhone
Izvo hazvina kumbobvira zvave nyore kwazvo, uye iyo dzidziso ichaita senge inenge bullshit. Kana tangove nefaira rakadzorwa mumhando .m4r Isu tinongofanirwa kubatanidza yedu iPhone kuburikidza neUSB kuPC / Mac ine iTunes yakavhurika. Kana zvese zvikaenderana, isu tichaona kuti padivi paniin inovhura kuruboshwe. Pakati pesarudzo dzakawanda tichaona iripo iyo ye Toni, uye ndepatiri kuenda kubaya.
Raibhurari yetoni ichavhura, kunyangwe zvingangodaro isina chinhu. Iye zvino pasina kubvisa iyo iPhone kubva kune tambo isu tichaenda kudhonza iyo mimhanzi faira mune iyo folda. Takamirira mashoma mashoma ndokuenda Zvirongwa> Ruzha> Rwiyo uye isu tichaona kuti muchikamu chepamusoro chinoratidzika chaizvo matauriro atichangobva kuburitsa kuburikidza neTunes. Mumaminetsi mashanu chete unenge uine rwiyo rwako rwaunofarira setoni yeIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro Ekuchinjisa Ringtones kuna iPhone kubva iTunes 12.7
Dario uye akadaro
Ndine urombo uye inogona kushandiswa senge toni yekuzivisa, ini ndoda kushandisa yetsika toni yeWhatsApp
Pindura Dario uye
Dhariusi Castillo akadaro
Pindura Dario Castillo
Handikwanise kutenda kuti zvaive nyore kudaro !! uye ndakavatsvagira nenzira yekare, kudzamara ndazofunga kuti toni yekurira iri muTunes haina kuoneka nekuti ndakanga ndisina kuvandudza foni yangu.
Ndatenda nerubatsiro !!
claudio dimanche akadaro
pandinodhonza kuwedzera inondiudza kuti haina kuwana iyo yekutanga faira
Pindura kuna claudio dimanche
Mangwanani akanaka, Ndatenda kwazvo nechinyorwa uye ini ndatoedza uye chinoshanda kwazvo 😉
Mubvunzo wangu ndewekuti ... ungagadzirise sei kana kudzima maroni toni andisingachadi kuva nawo parunhare? Nekuti miseve yakavanzwa uye ini handioni mawaniro ekuita mheremhere yandisingade. kana kuda kuzovezve.
Ini handina kunzwisisa tsananguro yako kana ndichida kupfuudza ruzha kumatoni toni mu iTunes?
unodhonza kubva kupi? nhanho iyoyo haina kujeka kwandiri
Pindura kuna gab
Kana iwe ukatarisa iro "Manage mumhanzi nemavhidhiyo nemaoko" bhokisi uye tinya iro "Nyorera" bhatani, iwe unozogona kusarudza mheremhere kubva kune yako kifaa (mu iTunes) uye tinya iyo Delete kiyi (iwe uchazobvunzwa for yekusimbiswa kudzima iyo faira).
Mune iTunes pakombuta yako.
Tarisa bhokisi riri padhuze nemaoko gadzirisa mimhanzi nemavhidhiyo.
Iye zvino iwe unofanirwa kugona kudzima maroni ne iTunes.
Ariel vargas akadaro
Sei ikozvino kana ini ndikabatanidza iyo iPhone ne iTunes hazvioneke mune yepadivi?
Pindura kuna Ariel Vargas
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri saEthan. Ndine m4r faira pakombuta uye pandinozvvuzvurudza kuenda kufaira remumhanzi zvinondiudza yambiro yekuti ringtone harina kuteedzerwa ku iphone nekuti haigone kuridzwa pane ino iphone.
Ndatenda!!! Ini ndanga ndichiita izvi masikati ese uye pakupedzisira, nekuda kwetsananguro yako, ndakabudirira. Shuwiro yakanakisa
Kutenda, zviri nyore kwazvo uye zvinobatsira !!
Chando dema akadaro
Ndinokutendai zvikuru, dambudziko rakagadziriswa.
Pindura kuBlack Ice
Aigona here mumwe munhu kundibatsira, ini ndine toni yangu isingasvike makumi matatu mumafomati .m30r, ini ndakabatanidza yangu iPhone uye zvese zvaive zvakanaka, ndakadzvanya pane chishandiso asi pandaka dhonza toni kune iyo folda yechigadzirwa TONES hapana chinoitika, ndokuti, haina kuiisa mufaira. Mumwe munhu anogona kundiudza kuti nei izvi zvichiitika kana kuti kuzviita sei kupfuudza ruzha?
Kana uine MAC. NENZIMA FONI YAKABATANIDZWA KUITUNES !!! Toni dzese dzinozvuvawira kudesktop. Zvino muFINDER, enda kune iyo tebhu »GO» mukati iyo inofamba kuenda ku "HOME" uye iwe enda kufolda ye »MUSICA» wozoenda kune imwe ye »ITUNES» wozoenda kune imwe ye »ITUNES MEDIA» uyezve kune imwe ye »TONES" izvozvi toni dzese dzauinadzo mu desktop unozvizvuzvurudzira kune iyo «folda». KUGARA UCHIVAIWO MUFOLERERI IYO, KUBVA PANO UNOVAKWEVEDZERA KUNE IPHONE DEVICE YAKO KWAKABVA SUBFOLDER YEMA »TONES» INOUYA UYE INOFANIRA KOPIWA KUNYANYA KUSANGANISIRWA KUNE IPHONE YAKO.
Zvakanaka, handina nzira yekuwedzera kana kudzima dziya dzandiinadzo, ndakawiriranisa nekudzima ivo nemaoko uye vanoramba vachioneka vese pane iphone ... kana kuteedzera kuTunes folda, kana kuchinja dhairekitori, kana kuita mafaera nemaoko sepakutanga ... hapana chinhu chisiri ini handikwanise kuwedzera kwete toni imwe chete kana yekuwedzera kwenguva kana kwenguva pfupi, hapana kana chinhu.
Michael Valero akadaro
Ndine IP`hone kwemakore, kubva muna4 kusvika nhasi kuti ndanga ndichipfeka yechinomwe, asi ndinogona kukuvimbisai kuti ini handisvike ku7 kana 8 uye hakuna imwe. Iyo foni iyo sefoni yakanaka uye inoshanda, asi zvinosuwisa kuti pakugadzira bhokisi munzvimbo mune 10 Iphone 15 vane toni imwechete. Iye zvino ndinotora maawa maviri kuti ndiwane toni yemimhanzi yangu. Pa samsung zvakanditorera 14 maminetsi. Zuva rega rega rakanyanya kuoma uye yega yega yekuvandudza inovanza zvakapusa kuti iwe upfuure mubhokisi. Zvakanaka ndichagara chero bedzi foni ichiripo, ahh izvo pasina kutaura kuti iwo matanhatu andaive nawo anoshanda zvakakwana kusvikira ndavandudza izvo uye zvichaitika netsaona kana mukugadzirisa kwekupedzisira vakaisa chimwe chinhu kuti chiite kuti chinonoke uye bhatiri rinopera ipapo ipapo ?????
Pindura Miguel Valero
Zvinoitika kwandiri saEthan ini ndichidhonza asi hazviteedzerwe. Chiratidzo chinoonekwa padhuze neni chinoti "batanidza" uye ndizvozvo. ndine mahwindo 7. ndatenda pamberi
Ruzivo iwe rwaunogovana runobatsira kwazvo. Ndatenda
iFixit yabvisa iyo itsva Apple TV 4K